Been-abuurka ayaa baabi'in kara cilladaha sida tuur-tuuridda inta lagu guda jiro hawsha dhalaaleynta waxayna hagaajin kartaa dhismaha yar-yar. Isla mar ahaantaana, iyada oo ay ugu wacan tahay dhawridda dariiqa birta oo dhammaystiran, sifooyinka farsamo ee hilmaamku guud ahaan way ka roon yihiin kuwa wax lagu shubay. Wixii ...
Waa maxay shaqooyinka dabagalka baabuurta la beddelay iyo goomayaasha hubku?
Waa maxay shaqooyinka dabagalka baabuurta la beddelay iyo goomayaasha hubku? 1. Qurux badan, ha ahaado giraangirkii asalka ahaa ama giraangirkii la beddelay, sababo kala duwan oo la yaab leh awgood, giraangirta iyo taayirku isma waafaqsanayaan baaburka baabuurka laftiisa. Ku habboonaanta halkan macnaheedu waa in xarunta giraangiraha ay ka badan tahay ama ka yar tahay, oo ku saleysan ...
Xaaladda abaabul ee iska -dhaafidda giraangiraha ka dib been -abuurka
Been -abuurka giraangirta curyaamiinta ayaa inta badan la mariyaa kululaynta, isbeddellada iyo hababka qaboojinta. Cafiska giraangiraha ayaa muujinaya xaalado urur oo kala duwan oo ay ugu wacan tahay halabuurka maaddiga iyo baaxadda giraangirta giraangirta. Marka la soo koobo, inta badan waxaa jira labada qodob ee soo socda. 1. Heerka urur ee lar ...